အကြောင်းအရာပေးပို့မော်ကွန်းတိုက် 10 ၏စာမျက်နှာ 29 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery (စာမျက်နှာ 10)
ဘယ်နေရာမှာမဆိုမိုးတိမ်အတွက် Aframe ဖြင့်ကယ်လွှတ် Adobe ကသင့်ရဲ့သင်းအတူတူသူတို့နည်းတူရှည်လျားကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်မှုရှိသည်အတိုင်း, မှာ "အထဲကစခန်းချ" သည့်နေရာများတွင်နေပါစေအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Adobe က hosting အတွက် Aframe မိုဃ်းတိမ်ကိုပလက်ဖောင်း၏မိတ်ဆက်ဘယ်နေရာမှာမဆို NAB2015 မှာအရပျကို ယူ. ပြပွဲရဲ့ကြီးမားတဲ့ hits ၏တဦးတည်းပဲ! အခုတော့ Aframe အဆိုပါတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ...
TransferSoft အားဖြင့် HyperTransfer ™: File ကို transfer efficiency ၏အနှစ်သာရ!
သင်၏ဖိုင် LA ကအတွက်ပြီးဆုံးသောအခါကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရစ်, နယူးယောက်, လန်ဒန်အားလုံး၌ထိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းဒါကြောင့်မူလကဖန်တီးခံရမယ့်အဖြစ် 1TB ဖိုင်လွှဲပြောင်း, ဆိုပါစို့။ wow, ထိုစီမံကိန်းကိုထိရောက်မှုနှင့်သင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ၏ကြီးတွေခြုံငုံရုပ်ပုံလွှာကိုအဘယ်သို့အချိန်ချွေတာတဲ့တောက်ပအယူအဆပဲ! NOW က, TransferSoft ဟာအလွန်ထူးခြားတဲ့ရှိပါတယ် ...
ရုပ်ရှင်, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် IBC2015 မှာအသံအမြင်အာရုံစျေးကွက်များအတွက်ပြောင်းလဲနေသောလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအရေအတွက်ကမိတ်ဆက်လိမ့်မည်! အဆိုပါ IBC2015 ပစ်လွှတ် / ကြေညာချက်များသည်သင်၏စက်ရုံစစ်ဆင်ရေးသို့ Facilis ထုတ်ကုန်များ၏ပေါင်းစည်းမှုကိုရိုးရှင်းလိမ့်မည်သည့်အတွက် Adobe, Telestream, VSN နှင့် Marquis အသံလွှင့်နှင့်အတူတစ်သမဝါယမမိတ်ဖက်သဘောတူညီမှုဖွစျလိမျ့မညျ၏မီးမောင်းထိုးပြ။ ဒီတော့ IBC2015 မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အသှငျအပွငျပါလိမ့်မယ်အောင် ...
Premiere ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် Vantage: တစ်အနာဂတ်-သက်သေပြချက်လုပ်ငန်းအသွားအလာ Creating!
LA က-based ပရီးမီးယားလိဂ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံး encoding ကနှင့်ဖြန့်ဖြူးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတဦးတည်း, တစ်အနာဂတ်-အထောက်အထားလုပ်ငန်းအသွားအလာဖန်တီး GPU ကိုအရှိန်မြှင့် Lightspeed Server များပေါ်တွင်အပြေးနေကြရသောမျိုးစုံ Telestream Vantage မီဒီယာ-အပြောင်းအလဲနဲ့စနစ်များကိုဝယ်ယူခဲ့သည်! "ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသို့သူတို့ကိုငါသိုလှောင်ထား, ငါတို့ဗိမာန်ပုံစံသို့ဖိုင်တွေကိုဝှက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထံမှသခင်ခံယူနှင့်ထံမှတောငျးဆိုခကျြအပျေါ ...
JMR ကွန်ယက်ရဲ့တစ်ဖက်မှာသို့မဟုတ်ကမ္ဘာ့ဖလားခန့်ဖိုင်လုံလုံခြုံခြုံလွှဲပြောင်းဘို့ BlueStor DataMover ပစ္စည်းကိရိယာကြေညာ
JMR ရဲ့နယူး DataMover Terabyte အရွယ်ဖိုင်များကိုအနီးတွင်လိုင်းမှာ Gigabyte လွှဲပြောင်းဘို့မတူနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, လုံခြုံရေးနှင့်အဆင်ပြေအရွယ်မှာသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်စနစ်များကိုပေါင်းစပ်ရုံထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, ဒေသခံကျယ်ပြန့်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဧရိယာကွန်ရက်များ JMR အီလက်ထရောနစ်, Inc ကိုဖြတ်ပြီးအမြန်နှုန်းကိုထောက်ပံ့ပေး သူတို့ရဲ့သစ်ကို BlueStor ™ DataMover ™ပစ္စည်းများ၏ယေဘုယျရရှိနိုင်မှု။ အဆိုပါ JMR DataMover ပစ္စည်းတစ်ခုမြန်နှုန်းမြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတန်းစားဒေတာဖြစ်ပါတယ် ...
IBC688 မှာသစ်ကို SL-12 အာဏာနှင့်ကြိုးမဲ့စနစ်ကအတူအထင်ကြီး62015-လမ်းကြောင်းခရီးဆောင်ရောနှော / အသံဖမ်း feature မည်! အဲဒီနှစျခုထုတျကုနျ၏တွဲဖက်မှုဆက်ဆက်ချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်နှင့်အော်ပရေတာတစျခုကြိုးမဲ့တည်နေရာတစ်ဦးထံမှတစ်ခုလုံးကိုအသံစနစ်ကထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်နိုင်စွမ်းအားငါပေးမည်! အဆိုပါ 688 (ထိုခဲယဉ်းနှိပ် 6-စီးရီးဒီဇိုင်းကိုမိသားစုတစ်စု၏နောက်ဆုံးပေါ်အဖွဲ့ဝင်) ကထည့်သွင်း ...
JAMPRO antenna #IBC2015 မှာကုန်ပစ္စည်းလိုင်းတိုးချဲ့ခြင်း
JAMPRO antenna, 25,000 ထုတ်လွှင့်ကျော်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တပ်ဆင်နှင့်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအဘို့ရောင်စဉ်အထိချဲ့ထားတဲ့အင်တာနာ, ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်စစ်ထုတ်မှုများအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်ခေါင်းဆောင်နှင့်အတူ Inc.-, display ကို @IBC 2015 အပေါ်ဖြစ်လတံ့သောသစ်နှစ်မျိုးကို FM ရေမော်ဒယ်လ်မိတ်ဆက်! အဆိုပါ3ဒြပ်စင် Yagi အင်တင်နာနှင့် Band II ကို Dipole အင်တင်နာ။ "JAMPRO များအတွက်အစိုင်အခဲဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်ရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ် ...
10 ၏စာမျက်နှာ 29«ပထမဦးစွာ...«89101112 » 20...နောက်ဆုံး»